Fifa 23 seyekupedzisira: EA uye mubatanidzwa wepasirese mune ramangwana ex-partner - mutambo poindi - bhodhi mitambo nemitambo yemavhidhiyo
Sokuzivisa kwakaita Electronic Arts, muparidzi nesangano rinotonga pasi rose reFIFA vachaenda zvakasiyana zvichitevera kuburitswa kweFifa 23. Chikamu chinotevera chemutambo wenhabvu wenhabvu chichava chekupedzisira pasi pezita rezinesi iro rave richizivikanwa kwemakumi emakore.
Zvakanga zvaziviswa kare kuti vatsigiri venhabvu vanogona kutarisana neshanduko dzakadzama - zvirinani kusvika pazita remukurumbira uye nevatambi vazhinji zvakare yakanakisa nhabvu mutambo wenhabvu une chekuita. Nekuti Electronic Arts nesangano repasi rose FIFA havana kuwirirana pachibvumirano cherezinesi, nhevedzano iyi ichapihwa rimwe zita. Yakanga yatove kutenderera kuburikidza neinternet uye ikozvino yakasimbiswa: EA Sports FC.
Fifa 23: Kubatana kwekupedzisira pakati peEA nemubatanidzwa wenyika
Vatsigiri venhabvu vakaziva mutambo uyu pasi pezita rekuti "Fifa" kweanoda kusvika makumi matatu emakore, uye chikamu chekugadzirisa chingangove chakanyanya kushata kana Electronic Arts nemubatanidzwa wepasirese voenda zvakasiyana. Fifa 23 saka ichave yekupedzisira kubatana neiyo inozivikanwa brand, ipapo chete Electronic Arts ichazivisa rumwe ruzivo nezveramangwana reiyi nhevedzano. Chikamu chitsva cheiyi nhevedzano chichaonekwa mumatsutso 2022.
Zvipikirwa zvakazara: "Chiratidzo chedu cheEA Sports FC ndechekugadzira kirabhu yenhabvu yakakura uye ine simba pasi rose, pane epicenter yenhandare yenhabvu," akadaro Andrew Wilson, CEO weElectronic Arts. “Kwemakore anoda kusvika 30 tanga tichivaka nharaunda huru yenhabvu pasi rose – ine mazana emamiriyoni evatambi, zviuru zvevatambi vanodyidzana navo nemazana eligi, masangano nezvikwata. EA Sports FC ichave kirabhu yemumwe nemumwe wavo uye yevateveri venhabvu kwese kwese. "
Sekureva kwemuparidzi, vatambi vanozoona chaizvo izvo Electronic Arts iri kufungidzira uye shanduko ipi iyo EA Sports FC ichaunza kune vateveri muzhizha ra2023, ingangoita hafu yegore pamberi pekutanga kweiyo franchise nyowani.
Mushure mezvose, zvingave zviri nyore kune vateveri venguva refu kuti vazvijaire, nekuti kusaverengeka kudyidzana uye marezinesi munyika yenhabvu zvinoreva kuti vatambi havafanirwe kuita pasina chokwadi uye "zvikwata chaizvo". Kudyidzana kuri kuramba kuripo nePremier League, LaLiga, Bundesliga, Uefa, CONMEBOL uye mutsigiri Nike. Zvese izvi zvichaenderera mberi uye zvinofanirwa kupenengura kukosha kwekuzivikanwa kweiyo nhevedzano - kunyangwe pasina "Fifa" muzita. nokuti Electronic Arts mukana.
Uye FIFA? Sangano renyika pamwe haringangoregi mabhiriyoni achipfuura. Sangano rave nenguva refu rakaita kusvika pakupera kwemubatanidzwa wenguva refu uye rakatora danho: Naizvozvo, mumwe ari kuchinjana nevagadziri vemitambo, vezvemabhizimisi vezvenhau pamwe nevanoisa mari - iri pamusoro pekuvandudzwa kwezita renhabvu regore ra2024. Mutungamiri weFifa Gianni Infantino akanyanya kujeka: Chete icho "Real Fifa" ndiwo mutambo wakanakisa wevateveri venhabvu. "FIFA 23, FIFA 24, FIFA 25, FIFA 26 zvichingodaro" inguva yezita rezita rinosara uye richaramba riri mutambo wakanakisa. Saka pamwe pane Fifa 24 kubva kune imwe yekuvandudza studio. Uye zvinonzwika semhinduro yekuzvidza kune Electronic Arts pamusoro pehukama hwakaputsika.
Kare Isu Taive Pano Nokusingaperi iri pano: kuburitswa kweiyo co-op puzzle mutambo
Inotevera Mattel anozivisa He-Man uye The Masters of the Universe paRoblox
Ishe weRings Online: Kwidziridzo inovhura masuwo eMoria
Playtest: Ken Folletts: Mbiru dzePasi dzeXbox One
Deckbuilding RPG Loop Gamba yakabudirira paSteam